Barca Oo Arsenal Dalab Ka Diiday, Liverpool Oo Daafac Kale Lasoo Saxiixan… & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Maata – Garsoore Sports
Barca Oo Arsenal…
Suuqa kala-iibsiga cayaartooyda bisha Janaayo isniintii ayuu xirmay, balse waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan suuqii ugu dambeeyay sidoo kalena kooxuhu waxay isku diyaarinayaan suuqa xagaaga inay si fiican uga dukaameysataan.
Haddaba waxaan idiin soo gudbineynaan wararkii ugu dambeeyay ee wargeysyadda ay maanta qorayaan.
Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay laakiin uusan kalsooni ku qabin in 33 jirka weerarka ka cayaara ee reer Argentina Lionel Messi uu sii joogi doono kooxda xagaagan. (Athletic)
Qandaraaska Messi ee £492m ee Barcelona, ​​oo ku eg xagaaga, waxaa ku jira qodob u ogolaanaya inuu ku bixi karo lacag la’aan haddii Catalonia ay hesho madaxbannaani. (El Mundo, Mail)
Weeraryahanka reer Brazil Neymar, oo 28 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu qandaraas cusub oo afar sano ah u saxiixo kooxda heysata horyaalka Faransiiska ee Paris St-Germain. (Goal)
Manchester United ayaa laga yaabaa inay soo gabagabeyso xiisihii ay u qabtay weeraryahanka Borussia Dortmund ee reer England Jadon Sancho, oo 20 jir ah, kaddib markii ay la dhaceen 18 jirka garabka ka cayaara ee reer Ivory Coast Amad Diallo tan iyo markii ay kala soo wareegeen kooxda Atalanta, Weeraryahanka reer Norway ee kooxda Dortmund Erling Haaland, oo 20 jir ah, iyo daafaca reer France ee Sevilla Jules Kounde, oo 22 jir ah, ayaa hadda ah ahmiyadahooda. (Express)
Guddoomiyaha kooxda Tottenham Daniel Levy ayaa hor istaagay isku dayga PSG ee saxiixa cayaaryahanka khadka dhexe ee reer England Dele Alli, 24, waxaana lagu sababeeyay xaalada Spurs ee dhaawaca oo ka sii daraysa iyo qaab cayaareedkooda oo hoos u dhacay (Telegraph)
Arsenal, Chelsea iyo Manchester City ayaa xiiseynaya saxiixa 22 jirka garabka middig ee kooxda Inter Milan Achraf Hakimi oo u cayaara kooxda Inter Milan xagaaga. (Calciomercato)
Weeraryahanka da’da yar ee Republic of Ireland Sinclair Armstrong, oo 17 jir ah, oo lala xiriirinayo Manchester City, Celtic iyo Crystal Palace, ayaa qarka u saaran inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxda heerka labaad ee Queens Park Rangers. (TalkSport)
19 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Arsenal ee Folarin Balogun ayay u badan tahay in uu si xor ah uga tago kooxda dhamaadka xilli cayaareedkan. (Express)
Real Madrid ayaa isku dayi doonta inay iska iibiso 20 jirka reer Brazil Vinicius Junior xagaagan. (AS – Isbaanish)
Weeraryahankii hore ee Liverpool iyo England Daniel Sturridge, oo 31 jir ah, ayaa waxaa doonaya kooxaha ka dhisan MLS-ka balse waxa uu doonayaa inuu ku laabto England. (Mail)
Arsenal ayaa maalintii ugu dambaysay ee suuqa laga diiday dalab ka gudbisay daafaca kooxda Barcelona Junior Firpo oo 24 jir a (RAC1, via Metro)
Manchester City ayaa indha-indheeyayaal u dirtay si ay u daawadaan cayaaryahanka khadka dhexe ee reer Palmeiras ee reer Brazil Patrick de Paula, oo 21 jir ah, finalka Copa Libertadores. (UOL)
24 jirka Marseille daafaca dhexe ee reer Croatia Duje Caleta-Car ayaa aad uga xumaaday kaddib markii heshiiskii maalintii ugu danbeysay ee Liverpool uusan u dhicin. (Mail, via Mirror)
Fulham ayaa amaah ku dirtay Aboubakar Kamara, oo 25 jir ah,kooxda Dijon maalintii ugu dambaysay ee suuqa, kaddib markii uu xiddiga reer France diiday in uu ka qayb qaato tababarka kooxda. (Mail)
“Cajiib” – Guardiola Oo Dias La Barbardhigay Van Dijk